ओमकार टाइम्स भोली र पर्सि यस्तो सुचना जारी गर्दै सरकारले दियो दुई दिन सार्वजनिक विदा तर कहाँ ? पढ्नुहोस – OMKARTIMES
भोली र पर्सि यस्तो सुचना जारी गर्दै सरकारले दियो दुई दिन सार्वजनिक विदा तर कहाँ ? पढ्नुहोस
काठमाडौं । सुर्यविनायक नगरपालिकाले २ दिनका लागि विदा दिएको जानकारी गराएको छ । आज नगरपालिकाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा सुर्यविनायक नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा २०७६ साल असार ९ गतेदेखि शुभारम्भ हुन गइरहेको छ ।
उक्त अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पाँचौ नगरसभाको तयारी र व्यवस्थापनकालागि सूर्यविनायक नगरपालिका वडा कार्यालयहरु र नगरपालिका अन्तर्गतका विषयगत कार्यालयहरुमा मिति २०७६ साल असार ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।